Nzuzo nke fulga nke Ọma Email Ndepụta Mgbasa Ozi na Akwụkwọ Mgbasa Ozi Email
Tọzdee, Disemba 3, 2009 Satọde, 27 Juun 2015 Scott Hardigree
Mara: Edeghị ọkwa a maka ndị nwe ndepụta. Edere ya maka ndị mgbasa ozi na-agbazite ndepụta email ma ọ bụ kpọsaa na akwụkwọ akụkọ email. Ọ bụrụ na ị bụ onye mgbasa ozi nwere, ma ọ bụ na-eme atụmatụ, itinye email nke atọ n'ime ngwakọta ahịa gị, ọ ga - enyere aka iji ọwa rụọ ọrụ nke ọma ma nweta ROI ka mma, yana obere mmefu ego. Na njedebe, ọ ga - enyere ndị nwe ndepụta aka. Emechaa onye mgbasa ozi nwere obi ụtọ bụ onye mgbasa ozi na-emegharị ọnụ.
Kemgbe afọ m niile na ahịa email ma na email ahịa gị n'ụlọnga na email ndepụta mgbazinye n'akụkụ, M nwere a ole na ole mkparịta ụka dị ka nke a, na m ịkọwa okwu, “M na-akagbu m mkpọsa n'ihi na m na-agaghị na-ezu [clicks, edu, ahịa, ma ọ bụ ndị ọzọ na-ahụ anya pụta]. ”Mgbasa ozi ahụ na-akwali mkpọsa ahụ ma hapụ ndakpọ olileanya na arụmọrụ nke ndepụta email.
Mana enwekwara oge mgbe, tupu onye mgbasa ozi (ma ọ bụ ụlọ ọrụ ha ma ọ bụ ndị na-ere ahịa aha ha) wepụrụ mkpọsa ahụ, ha dị njikere ịme obere mgbanwe ole na ole ma tụgharịa. Maka ndị ahụ nwetụrụ obi nkoropụ oge ahụ hụrụ mmụba ọfụma na arụmọrụ mkpọsa. M kesara ha otu nzuzo na ezi-okwu na mgbasa ozi email na-aga nke ọma, nke bụ:
Dakọtara ihe okike gị na ihe ịga nke ọma na ebumnuche gị.
Eeh. Nke a bụ ire ahịa 101, mana enweghị m ike ịgwa gị oge ole m hụrụ na ebumnobi, ihe okike, na usoro nke ihe ịga nke ọma na-emezighị emezi. Na mgbe ha nọ, mkpọsa adịghị nso ịga nke ọma dịka ọ nwere ike. (IHE: Maka ebumnuche amaghi nke a na-eme ọtụtụ ihe na email.)
Ozi ọma ahụ bụ na ọ bụ usoro dị mfe nke nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa ahịa ahịa email. Mgbe ị na-elele mkpọsa email-centric, bido jụọ onwe gị ajụjụ anọ ndị a:
Kedu ihe m chọrọ maka mkpọsa a?
Ihe okike m na odide nke m ọ dabara na ihe mgbaru ọsọ ahụ?
Ihe m na-enye, ihe okike na ọdịda maka ezi uche dịịrị ndị na-ege m ntị ọ bụghị naanị m?
Kedu otu m ga-esi amata ọganiihu mkpọsa a, na ọ dabara na ebum n'uche?
Gịnị ka ị na-agbalị inweta? Mbọn? Ndebanye aha? Ajuju ahia? Ngwa ngwa ngwa? N'agbanyeghị ebumnuche gị, gbaa mbọ hụ na ihe okike gị, ibe ọdịda, na nha gị niile dabara na ebum n’uche ma nwee nghọta site n’echiche ndị na-ege gị ntị (nke na-adịkarị iche na nke gị).
Ebumnuche gị ọ bụ akara? Email na - enweta ebumnuche akara ngosi dị mkpa: mmata, mkpakọrịta ozi, ihu ọma, ebumnuche ịzụta, wdg. Achọpụtala m na ọtụtụ ndị mgbasa ozi, ọkachasị mgbe ị na-eji mgbasa ozi e-newsletter, nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi ịre ahịa na ntanetị email. Ihe okike ha na-etinye aka, akara ha pụtara ìhè, ha na-ewusi ozi ha chọrọ ka ndị na-ekiri ha na-esonyere akara ha. Mana nkwụsị, mgbe enwere otu, na-abịa mgbe onye mgbasa ozi na-atụle mkpọsa site na ịpị aka ma ọ bụ ụfọdụ metric ndị ọzọ mgbe emeghị ihe okike iji kpalite ụdị nzaghachi ahụ. A na-atụle ika site na mmetụta na-ekiri (ya bụ, mmetụta) mgbasa ozi nwere n'echiche na ebumnuche nke onye na-ekiri ya, ọ bụghị site na nzaghachi ozugbo. Kama jiri onu ogugu emeghe dika barometer gi.
Visits chọrọ nleta na weebụsaịtị gị ma ọ bụ ndebanye aha ọhụrụ? Akwa! Jide n'aka na ị ga-emepụta ihe okike gị iji kpalite ụdị nzaghachi ahụ. Ọ bụrụ na ozi mgbasa ozi gị bụ, “WidgetTown: Ngwaọrụ kachasị mma gburugburu. Pịa ebe a maka ndị ọzọ. ” ị nwere ike ịbụ na ị metụtawo atụmanya 'atụmanya, mana ị yighị ka ị pịa. Gịnị kpatara ha? Ha nwere ozi niile ha chọrọ, na n'okporo ụzọ, ọ bụrụ na ha chọrọ wijetị, ha nwere ike ịkpọ gị. Mana ha agaghi apia ugbua ma obu ha, site n’ichebe oge emetughi ihe nwere mkpa ozugbo. Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị bụ ịdenye aha, nye onye na-ekiri ihe kpatara ya iji pịa. Nye ha ihe bara ezigbo uru (ha).
Ihe mgbaru ọsọ gị ọ bụ ndu ọgbọ? Ihe nkwado na ọdịda bụzi akụkụ dị mkpa nke mkpọsa gị. Ihe okike o na-abanye na peeji ọdịda? A na-akwalite ihe agbamume ahụ na ihe okike n'ụzọ doro anya ma pụta ìhè na peeji nke ọdịda? O doro anya na peeji nke ọdịda (na email) ihe atụmanya ga-eme ọzọ, ma è mesiri ihe mkpali ahụ ike? Enwere ihe ndọpụ uche (igodo, njikọta mmekọrịta mmekọrịta, wdg) nke ga-egbochi atụmanya ahụ ịrụcha ọrụ ahụ? Otu n'ime ndị a nwere ike belata ịdị irè nke mkpọsa ọgbọ na-ebelata ọnụ ọgụgụ ndị na-eduga gị n'ịmepụta.
Eleghi anya ebumnuche gị bụ ịre ahịa n'ịntanetị. Ọ bụ ngwaahịa mmadụ ga - azụta na mkpali ma ọ bụ ka mkpọsa gị dabere na ihe omume, dị ka ezumike? You gabigala usoro ndenye ọpụpụ niile? Ọ dị ọcha ma dịkwa mfe, ma ọ bụ nke gbagọrọ agbagọ ma sie ike? You na-esochi ụgbọ agbahapụ ka ị wee hụ ebe nsogbu dị? Ndị na - eweta ọrụ email gị (ESP) ma ọ bụ azịza email dị n'ime na-akwado nkwado ịhapụ ụgbọ? You na-etinye kuki na ihe nchọgharị ndị ọbịa ma ọ bụrụ na ha laghachi na ụbọchị ole na ole wee zụta ngwaahịa ahụ, ị ​​nwere ike ịnye mgbasa ozi nke na-eduga?
Site n'ụzọ, agbalịrị imezu ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ na otu mgbasa ozi. Ọ ga-adị ka futon? Ọ naghị eme ka ezigbo sofa ma ọ bụ akwa dị mma.
Ndị a bụ ole na ole n'ime ihe ndị bụ isi ma na-adị ugbu a nke nwere ike imetụta omume achọrọ ma si otú ahụ na nyocha gị nke ROI nke mkpọsa email email nke atọ. Naanị cheta, akara dị n'etiti na email ịga nke ọma na azụmaahịa yana ọfụma na nke ọma. Jiri usoro ndị a iji hụ na ozi gị na ebumnuche gị dị n'ahịrị na ị nwere ike ịgbanye mita ROI ozugbo maka ihu ọma gị.
Tags: nichole kellypostụlọ ọrụ